Ihe ịga leta Hanoi | Akụkọ Njem
Ihe ịga leta Hanoi
Mariela Carril | | Hanoi, Ihe ị ga-ahụ
Vietnam Ọ bụ otu n'ime mba ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-adọta ọtụtụ ndị njem nleta maka ọdịmma ya na maka ọrụ ya na akụkọ ihe mere eme nke narị afọ XNUMX. Nye hụtụbeghị ihe nkiri banyere Vietnam Vietnam ma ọ bụ oge ala ndị a bụ ndị France na-achị?
Otu obere mba, nke ahụ bụ ihe Vietnam, ma belụsọ ma ị si mba agbata obi gị banye, ihe a na-emekarị bụ ịdata ọdụ ụgbọ elu na Hanoi, isi obodo ya. Ka anyị lee ihe anyị nwere ike ịma ebe a. Kedu ndị ebe ndị njem nlegharị anya na Hanoi?
2 Ihe ị ga-ahụ na Hanoi
Zuo ike na ndagwurugwu Osimiri Uhie na ọ bụ obodo nke abụọ kacha mkpa na mba ahụ n'ihi na nke mbụ bụ ewu Chi Chi Minh. Site na njedebe nke narị afọ nke XNUMX ruo na njedebe nke Agha Worldwa nke Abụọ ọ bụ ebe etiti ike ọchịchị France, Indochina, yabụ ihe owuwu ọdịda anyanwụ kpochapụrụ ihe ochie kacha ochie na nke ọdịnala. Ihe ihere Ọzọkwa, site na '40 ruo '45, ndị Japan bi na ya yabụ obodo a enweela ọtụtụ ihe ọjọọ na obere oge.
Kemgbe 1976, afọ nke njikọta, ọ bụ isi obodo nke mba ahụ. Ọ bụ obodo nke subtropical ihu igwe nwere oge anọ. N'ụzọ doro anya, ọ dị mma iji zere oge okpomọkụ nke dị oke ọkụ (site na Mee ruo Ọgọstụ), yana nnukwu mmiri ozuzo. Ọ dị mfe ịga site na Nọvemba ruo Jenụwarị.
Ihe ị ga-ahụ na Hanoi
Akpa, nke Obodo ochie. Ọ bụ ebe ahụ na-echekwa okporo ụzọ mbụ na ihe owuwu nke ochie Hanoi agwakọtara na ụlọ ndị France. N'ebe a, enwere ụlọ ahịa ndị a raara nye na ịdegharị ihe osise ndị a maara nke ọma, na-akpụzi ọrụ aka ọdịnala na achara na akwụkwọ nwere agba, ụlọ ahịa na-arụ ọrụ oge ochie nke ịcha, ịkwa ụcha, na azụmaahịa na silk, ndị ọkwá nkà, na nkenke, ntakịrị ihe niile.
Ochie nkeji iri na ise bụ obi nke hanoi, a ekwo Ekwo nke ndị mmadụ n'okporo ámá na n'akụkụ ụzọ, na kafe, ụlọ nri, ụlọ ahịa n'okporo ámá, alleys, ogige nke ime obodo, ndụ n’onwe ya otu puku afọ gara aga. Gagharị ebe a, ị furu efu, bụ otu nnukwu ahụmịhe obodo.
N'aka nke ọzọ Oflọ akwụkwọ nke akwụkwọ ọ nwere ụlọ akwụkwọ mahadum Vietnamese mbụ. Ọ wuru na narị afọ nke XNUMX na raara nye Confucius. Findchọta ya na Thang Long Imperial Citadel o nwekwara otutu halllọ Nzukọ Alaeze, ihe a kpụrụ akpụ na pavilions. Ọ nwere nnukwu ebe 54 puku square mita ma gụnye ogige, ọdọ na ọtụtụ ogige. N’ikwu okwu banyere nnukwu ụlọ elu a, ị ga-ahụ ya n’etiti obodo, ọ bụghị ihe ọzọ karịa ngalaba ahụ ezinụlọ ezinaụlọ biri.
E wuru ya n’oge nke Lý Dynasty, na 1010, ma gbasaa site n’ọchịchị ndị ọzọ. Site na mwakpo ndị France na njedebe nke narị afọ nke 2010, ọtụtụ n'ime ụlọ ndị a tara ahụhụ ma ụfọdụ furu efu n'ihi na ndị ọchịchị na-akwatu ha. Ọ bụ na narị afọ nke iri na itoolu a ka a na-egwupụta ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ọ bụ na XNUMX ka mpaghara etiti ahụ UNESCO kwupụtara na ọ bụ World Heritage Site.
La Hanoi Flag Tower Ọ bụ otu n'ime akara nke obodo ma bụrụ akụkụ nke World Heritage. O nwere ntakịrị karịa 33 mita elu, ruru ọkọlọtọ 41, ma wuo ya na 1812 dị ka ebe nlebara anya maka nnukwu ụlọ. Ọ dị mkpa n'ihi na a zọpụtara ya na mbibi nke ndị France mepụtara na njedebe nke narị afọ nke XNUMX ma nwee ike ịga leta ya taa.
I nwekwara ike ileta na Hanoi the Pilar Pagoda, temple ke ikpe Buddha. E wuru ụlọ nsọ a na 1028 wee rụzie ya ọtụtụ oge. A na-akpọ ya n'ihi na ọ na-ewu ya na osisi nwere otu ogidi nke 1.25 mita na dayameta na mita anọ dị elu nke a pịrị apị dị ka mkpuru osisi lotus, akara Buddha nke ịdị ọcha. N'ezie, ọ bụghị ụdị nke mbụ ebe ọ bụ na e bibiri ya na '50s, n'agha ahụ, ma wughachi ya mgbe ọtụtụ afọ gachara.
El Ho Chi Minh Mausoleum E wuru ya site na 1973 rue 1975 ma yie nke Lenin nke Moscow. Ọ bụ na Ba Dinh Square ma site ebe a Ho Chi Minh kwupụtara nnwere onwe nke mba ahụ na 1945. Mgbe ọ nwụsịrị na 1969 ndị Soviet gbasiri ozu ya ma wuo mausoleum ahụ kwagara ebe a ruo mgbe ebighi ebi.
Eziokwu bụ na ọnọdụ ihu igwe a ahịhịa na Hanoi dị ebube ya mere ịse foto nke ifuru na ubi abụrụla ewu ewu. Ọ bụrụ na-amasị gị ụdị a fotos mgbe ndị a bụ ebe ị na-agaghị echefu:
Ogige Nhat Tan, Ogige Ngoc truc, Ogige Phu Thoung: Ha na-ejuputa na ndi oyuyo na Tet Party, otu nke nabatara New Year, n'ihi na enwere nkpuru ahihia na okooko osisi ebe nile.
Ndagwurugwu nke Ifuru: ọ bụ na nkwụsị nke Nhat Chieu Street na Water Park. Ga-ahụ ọtụtụ narị square nke okooko osisi mara mma na njedebe nke afọ ọ bụ ebe mara mma, ezigbo paradaịs ifuru na, ọ bụ ezie na ọ bụ aka, mara mma.
Nkume Osimiri Uhie: Ọ bụkwa ebe a na-ewu ewu maka ịse foto na njedebe nke afọ. E nwekwara ọmarịcha akwa mmiri gafere ọdọ mmiri ahụ, ikuku mmiri na saịtị ya mere ha ji bụrụ usoro foto dị mma.
Ahia Ifuru Quang Ba: Na njedebe nke afọ, ahịa ifuru na-arị elu na Vietnam na ebe zuru oke ịzụta bụ ahịa a ebe ị ga-ahụ ọtụtụ puku okooko osisi na ọtụtụ puku ụdị.
Hoan Kiem Lake na Ebe Ochie: na usoro nke foto, saịtị ndị a na-enye ntọala mara mma. Chegodi na mgbe emere an’ime Ememme Afọ Ọhụrụ ndi amuma n’ememe ọdọ na ihe eji acha ya, okooko osisi ya na ama ya.
Ogologo Ogologo Brien: ọ mara mma karịsịa na ememme Tet.
N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'obodo Hanoi, anyị enweghị ike izere Halong Bay. Ọ dị kilomita 170 n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo ahụ na ọdịdị ala ya mara mma. Enwere ihe karịrị puku agwaetiti atọ na agwa mmiri limestone nke na-aputa site na ndu ndu ndu nke onu mmiri na o di ka uwa ozo, ihe efu, ma oburu na i tinye onu na stalagmites na stalactites na abaiti na grottos gburugburu.
O doro anya na nleta na Vietnam enweghị ike ịmalite ma kwụsị na Hanoi, mana ọ bụrụ na ị gafere obodo nke a bụ ihe ị na-agaghị echefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Hanoi » Ihe ịga leta Hanoi
Kaadị Gold American Express, otu nke kachasị mma maka njem